प्रहरीको गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि सबै चकित !! – Sapana Sanjal
May 30, 2021 85
Sapana Sanjal : प्रहरीको गस्ती टोलीले चितवनमा प्लास्टिकका झोलामा यस्तो भेटेपछि सबै च’कित !! चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले शनिबार चित्तलको मासुसहित चार जनालाई प’क्राउ गरेको छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको वटुकदल गण प्यारिधाप गुल्म र निकुञ्जको गस्ती टोलीले उनीहरुलाई राप्ती नगरपालिका–६ बाट प’क्राउ गरेको हो ।
Prevखाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर प’ड् किदा आमा छोरा परे
Nextआमाको कोभिड नतिजा नेगेटिभ, नवजात शिशुको पोजेटिभ भएपछि डाक्टर पनि अचम्मित